पैसा र पिआरले पखालेको चरित्र - खाडी त त्यसै बदनाम छ - Ek Jamarko
Home / समाज / पैसा र पिआरले पखालेको चरित्र - खाडी त त्यसै बदनाम छ
पैसा र पिआरले पखालेको चरित्र - खाडी त त्यसै बदनाम छ
बेलायत बस्ने एकजना दिदि ‘महिला बिकाश र नारि अधिकार’ को क्षेत्रमा काम गर्न बेलायतमै स्थापना भएको तिसजना महिला हरुको यौटा संस्थालाइ लक्षित् गर्दै भन्छिन-नारि अधिकारको लागि खोलिएको संस्थामा आवद्द ति तीसजना मध्ये बिस जना महिलाले अर्काको घरबार तोडाएर अर्काको लोग्ने संग बिहे गरेका छन् । कतिले आफ्नो लोग्नेलाई बीचबाटोमा छोडेर घरको न घाटको बनाएका छन् तिनीहरु नै नारि अधिकारको रक्षा गर्ने भन्दै संस्थाको अगुवाई गरिरहेछन । नारीको कुन खाले अधिकारको रक्षा गर्ने मुद्दा उठाउला र कस्ता महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ला त्यस्तो संस्थाले ?
गैह्र आवासीय नेपाली संघ ईजरायल शाखाका पुर्व अध्यक्ष दिपक प्रसाद ओलीको फेसबुकमा यौटा स्टाटस आयो । एकजना मान्छे जो उनको भिनाजु हुन राज दाहाल उसले आफ्नी दिदिलाइ मृत्युको मुखमा पुर्याएको साथै अर्की एकजना तारा अधिकारि नामकी महिला लाइ समेत समस्या पारेको भन्दै सार्वजानिक अपमान हुने किसिमको स्टाटस पोष्ट भएपछी पीडक भनिएका भिनाजुको तर्फबाट यौटा भिडियो आयो । युट्युबमा आएको उक्त भिडियोमा ति पुरुषले आफु पिडित भएको भन्दै गुहार मागिरहेको देखिन्थ्यो ।
भएको के रहेछ भने दिपक प्रसाद ओली को दिदि पारपाचुके गरेर सिंगल भएकी, राज दाहाल खाडीमा काम गर्थे । उनीहरुको सामाजीक संजाल मार्फत प्रेम बस्यो । त्यसपछि राज दाहाल खाडी छाडेर ईजरायल पुगे । सुरुवाती समय राम्रै भयो तर जसै जसै समय बित्दै गयो उनकी श्रीमतीले उनि माथि शंका गर्न थालीन । कतै बाहिर गएर आउदा को संग सुतेर आईस भन्ने, गुप्तांग चेक गर्ने सम्मका काम गर्न थालीन ।
अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गरेर सार्वजानिक ठाउमै राज दाहाल माथि हातपात गर्न थालीन । कोहि महिला संग बोल्यो भने उसै संग सुतेको आरोप लगाउन थालीन फलस्वरूप राज दाहाल श्रीमती संग टाढिदै गए । अहिले अन्तिम समयमा आएर घटना सामाजीक संजालमा छताछुल्ल हुन पुग्यो । तर अधिकारि संगका उनका केहि तश्विर हरु समेत सार्वजानिक गरे दिपक ओलीले ।
जानिफकार हरु भन्छन ईजरायलमा यस्ता घटनाहरु सामान्य हुन् । त्यहा कार्यरत आधा भन्दा धेरै मान्छेहरुको पारिवारिक अवस्था विखण्डित भएको छ । कोहि नेपालमै पारपाचुके गरेर उता गएका छन् कोहि उता पुगेर अलिकति प्रगति गरेपछि सम्बन्ध बिच्छेद गरेकाहरु छन् तर अधिकांसको पुरानो घरबार बिग्रिएको अवस्था छ ।
कतिपयले दोहोरो जिन्दगि बिताइरहेको अवस्था रहेको जानकारी पनि एकजना अनुभवीले दिए । दोहोरो जिन्दगि कसरि भने नेपालमा परिवार हुदाहुँदै केहि पुरुष हरुले ईजरायालमै अर्की श्रीमती राख्नु सामान्य कुरा भएपनि नेपालमा लोग्ने भएकी महिलाले इजरायलमा अर्को पुरुषलाई लोग्ने नै बनाएर राखेको अवस्था समेत देखिन्छ ।
यद्द्यपी त्यस्ता सम्बन्धहरु कति लामो समय टिक्छन अथवा त्यो सम्बन्धको कानुनि मान्यता के हो त्यसको जवाब भलै कसैले देला या दिन सक्ला तर ति सम्बन्ध हरु छन् र त्यहाको समाजले त्यस्तो सम्बन्धलाई मौन रुपमा स्वीकार पनि गरेको छ ।
कतिपयले सुरु गरेको नया घरबार पनि राज दाहालको जस्तै फोहोरी भएको छ । तर पनि समाजले त्यस्ता घटनालाई सामान्य रुपमा लिन थालेको देखिन्छ किनकि त्यहा ति तमाम कुकर्म को बावजुद उनीहरु संग मनग्य पैसा छ । समाजको नियम नै हो कि जो संग पैसा छ उसको इज्जतमा त्यति सजिलै आंच आउँदैन ।
हुन त चरित्र नाप्ने कुनै कसी हुदैन । चरित्रको बारेमा ठुला ठुला बहस हुने गर्छन हाम्रो समाजमा । चरित्रमा खोट देखाउदै कतिपय घरबाट तोडिईरहेछन । कतिपय मुद्दा हरु प्रहरी चौकी र अदालतमा घुमिरहेछन ।
चरित्र लाई यौन संग जोडेर बुझ्ने परम्परा छ नेपालमा । सरासर भन्दा यौनांगको जथाभावी प्रयोग गर्ने लाई चरित्रहीन भनिन्छ । अनी त्यही यौनांग को ईच्छा विपरीतको प्रयोग लाई हिंसाको रुपमा पनि हेरीन्छ हाम्रो मुलुकमा । लोग्ने फेर्नपर्ने वाध्यता आइपरेकी नारी समेत चरित्रहीन ठहरिन्छिन र समाज बाट तिरस्कृत हुन्छीन नै पर पुरुष संग हासेर बोल्ने महिला समेत चरित्र हिन ठहरीन्छीन यहा ।
तर नेपालमा भन्दा त विकसीत भनिएका देश हरुमा बसोबास गर्ने नेपाली नारी हरु यौन र सम्वन्ध फेराईका हिसावले बढी पिडीत रहेको पाईयो । यती सम्मकी जुन किसीमको सम्वन्ध लाई नेपालमा हाडनाता अथवा हिंसाजन्य भनेर दण्डीत गरीन्छ विकशीत मुलुकमा रहेका नेपाली हरुले त्यस्ता सम्वन्ध लाई सामान्य रुपमा लिने गरेको पाईयो ।
संबन्ध लाई नाफा नोक्सान संग तुलना गरेर जोड्ने र तोड्ने गर्ने समेत गरेको पाईयो । नाफा नोक्सानको लागी सम्वन्ध फेर्ने हरुलाई चरित्रहीनको ट्याग भिराईन्छ हाम्रो समाजमा तर विदेशीएको हाम्रै समाजले ति सबै कुरा साधारण रुपले पचाउदो रहेछ ।
कहा सम्म भने नेपालमा यौटा विवाह भएर यौटा सन्तान समेत भएका महिला हरु कागज पत्र मिलाएर हंगकंग गईसकेपछी पिआर लिनलाई सात वर्ष अर्कैकी श्रीमती भएर बस्दा त्यता पनि सन्तान जन्माउन बाध्य पारिएका या रहरले नै दोश्रो लोग्ने तर्फ बाट पनि सन्तान जन्माएर पनि दुबै तिरको सम्वन्ध जोगाएरै राख्न बाध्य पारिएका (?) महिला हरु पनि रहेको यथार्थ जानकारीमा आयो ।
त्यो अवस्था कति बाध्यकारी अथवा कति रहर द्वारा सृजीत हो अथवा स्वतन्त्रताको उपभोग हो सम्वन्धीत हरुलाई नै थाह होला ।
स्थाई बसोबास अनुमती पत्र (पिआर) बनेपछी सात वर्ष संगै बसेको कागजी लोग्ने छोड्दा नयाँ लोग्ने संगको सहवास बाट जन्मीएको सन्तानको कारण नेपालमा रहेको लोग्ने संग स्वत: छुटेपछी पुन: तेश्रो विहे गरेका र त्यो अर्को विहे गरेको लोग्नेले अर्को सात वर्ष पछी श्रीमतीको नामबाट पिआर पाईसकेपछी फेरी उनलाई छोड्दा तिन वटा लोग्ने फेरीएको अवस्थामा पुगेको परिस्थीती पनि देखीयो ।
यसरी लोग्ने फेरीदा तिनै वटा लोग्ने संग सन्तान जन्माउने महिला पनि रहेछन विदेशमा हंगकंग मै । तर समाज फेरिएको छ । सम्बन्ध हरु जतिसुकै छुटेपनि अथवा लोग्ने हरु जतिसुकै फेरी पनि त्यहा महिला हरु सम्मान पुर्वक त्यहाको नेपाली समाजमा आफ्नो दमदार उपस्थीती जनाउन सक्छन ।
अझ तिनै महिला अव अर्को विहेको लागि पुरुषको खोजीमा भएका समेत देख्न पाईयो । अझ स्वतन्त्र सिंगल मदरको रुपमा ब्वाईफ्रेन्ड खोजेर अर्को सन्तान ब्वाईफ्रेन्डको लागि जन्माइदिएको समेत देख्न पाइयो । त्यो आफै सृजित परिस्थिति होइन त्यसरी सन्तान जन्माउन महिलाले नै रहर गरेको पाईयो । त्यहा चरित्रको कुनै चर्चा गरिरहन पर्ने अवस्था छदै छैन । त्यो स्वतन्त्रताको उपभोग हो । त्यहा चरित्र माथि प्रश्न उठ्दैन । किनकि त्यहा पैसा छ अनि पीआर छ ।
नेपाली समाजको आँखा बाट हेर्दा यहा सम्म पिडीत महिला सम्म रहेको चर्चा सुन्न पाईयो की - पहिला सगोलका दाजुभाई मध्ये भाई संग विहे भयो । कारण वस लोग्ने संग छुट्नु पर्यो या दुर्घटना वस लेग्नेको मृत्यु भयो । अनी कागजी प्रकृया पुरा गरी आफ्नो लेग्नेको सगोलकै सहेदर एउटै घरका दाजु लाई लोग्ने मानेर सात वर्ष सम्म उसको (जेठाजुको) श्रीमती भएर वसीसकेपछी जेठाजुले पुन: छाडेर अर्को विहे गरेको कारण फेरी एक्लै भएको अवस्थामा रहेका महिला हरु पनि देख्न पाईयो ।
कागजी रुपमा आफ्नै सहोदर दाजु बहिनी या दिदी भाई हरुपनि लोग्ने स्वास्नी भएर बस्न परेको देखीयो । खाली स्थाई बसोबास अनुमती पत्रको लागी आफ्नै दाजुकी श्रीमती भएर अथवा आफ्नै सहोदर बहिनीको लोग्ने भएर बस्नु पर्दाको अनुभव कस्तो हुन्छ होला ? जस्तो भएपनि त्यो बाध्यता नहोला । खुशी खुशी त्यसरी बसिएको हुन्छ र त्यसरी बस्दा उनीहरुको चरित्र माथि प्रश्न उठ्दैन किनकि त्यहा मनग्य पैसा छ र जहाँ पैसा छ त्यहा इज्जत स्वतः हुने गर्दछ ।
अचम्मको कुरो त के लाग्यो भने त्यसरी तिन तिन वटा लोग्ने संग बच्चा जन्माएर पनि सामाजीक संजालमा तिनीहरुकै चरित्र सम्वन्धी स्वर चर्को देखीन्छ । उनिहरुले एक आपसमा तछाड मछाड गरेर चरित्र सम्वन्धी वहस गरिरहेका हुन्छन । कसरि सक्छन त त्यसो गर्न ? के कुराको आडमा या भरोसामा त्यसो गर्न सक्छन त ? प्रश्नको उत्तर प्रष्ट छ –पैसा र पीआर ! तपाइँ संग मनग्य पैसा छ र विदेशको पीआर छ भने जो सुकैको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार तपाइँ संग हुन्छ तपाईलाई त्यसरी प्रश्न उठाउने र बहस गर्ने तागत त्यहाको पैसाले र तपाइको पीआरले दिईरहेको हुन्छ ।
सरासर बुझ्दा कस्तो लाग्यो भने पैसा कमाई हुने देशमा नेपाल बाहिरको नेपाली समाजमा एकजना महिला जति जना पुरुषकी श्रीमती हुनुपरेपनि ति महिला पिडीत हुदैनन । नेपाल भित्रको नेपाली समाजमा त्यो किसिमको सम्झौता गर्न पर्ने अवस्था आइपरे के हुदो हो ? स्विकार्थ्यो होला त हाम्रो समाजले ?
नेपाल भित्रको नेपाली समाज भए यो मामलामा महिला लाइ अवला पिडित र त्यो किसिमका पुरुष हरुलाई घोर पीडकको रुपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो होला । महिला अधिकार कर्मीले उसको बलात्कार भएको भनिसक्थे ! किनकी नेपाल भित्रको नेपाली समाजमा यी सब परिस्थीती बाट गुज्रदा पैसा कमाई हुदैन, न विदेशको पीआर या ग्रिनकार्ड नै पाइन्छ । बिदेशमा पैसा कमाई हुन्छ त्यसैले पैसा नै रैछ अदालत, पीआर नै रैछ महिला अधिकार र न्याय पनि ।
पैसा कमाई हुने भएपछी जस्तो सुकै सम्वन्ध पनि चोखो देख्छ समाज । अमेरीकामा यौटा आफु बस्ने फ्ल्याटको भाडा अफोर्ड गर्न नसकेर रुममेट कम बीएफ खोज्दै गरेकी महिला चोखै देख्छ हाम्रो समाजले किनकि उनि डलरमा पैसा कमाउछिन या उनीसंग ग्रीनकार्ड छ ।
त्यहा जे सुकै गरेर पैसा कमाएपनि त्यो पैसाको इज्जत छ किन भने देशको ईज्जत अनुसार त्यो पैसाको वजन बेग्लै हुन्छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया या हंगकंगमा सेटल हुन जतिजना सुकै कागजी लोग्ने बनाएर पार्टनर फेरी फेरी सहवास गरेपनि ति चेली चरित्रवती नै ठहरिन्छीन हाम्रो नजरमा । किनकी त्यहा त्यसो गरे बापत मनग्य आमदानी हुन्छ । तर नेपालमा परपुरुष संग हासेर बोल्ने महिला विटुली हुन्छीन त्यही समाजको नजरमा किनकि त्यसो गरे बापत नेपालमा न पैसा आम्दानि हुन्छ न कतिको पीआर नै बन्छ ।
युरोप-अमेरिकामा फरक या एकै समयमा आधा दर्जन पुरुष संगत ब्यबस्थापन गर्न सक्ने महिला चोखा र ईज्जतदार हुन्छन । हंगकंगमा तीनजना फरक पुरुष संग सन्तान जन्माउने महिला पनि चोखै हुन्छिन तर खाडी बाट पुरुषको मुखै हेर्न नपाउने महिला बिटुलि हुन्छीन । किनकि बिग्रेको चरित्रलाई कि पैसाले पखाल्छ कि पीआरले । खाडीमा न मनग्य पैसा छ न त्यहाको पीआर मुल्यवान नै - त्यसैले खाडी आफैमा बदनाम छ । आखिर चरित्र पखाल्ने कि त पैसा कि पीआरले नै रहेछ ।
पैसा र पिआरले पखालेको चरित्र - खाडी त त्यसै बदनाम छ Reviewed by Durga Pangeni on अप्रैल 19, 2018 Rating: 5